Frank Lampard oo durba loo soo bandhigay Shaqo Tabaranimo oo cusub
Home Horyaalka Ingiriiska Frank Lampard oo durba loo soo bandhigay Shaqo Tabaranimo oo cusub
Frank Lampard ayaa loo soo bandhigay inuu qabto shaqada tababarenimo ee kooxda Celtic kadib markii laga ceyriyay shaqada kooxda Chelsea, sida laga soo xigtay Don Balon .
Lampard waqtigiisii ​​tababaraha Chelsea ayaa soo idlaaday Isniintii, iyadoo xilli ciyaareedka Blues ay ku jirtay heerkeeda ugu hooseeyay.
Thomas Tuchel ayaa loo magacaabay garoonka Stamford Bridge maalinta ku xigta, taasoo la micno ah in waayo cusub uu durba ka bilaabatay SW6,.
Sida laga soo xigtay Don Balon, Lampard ayaa durbaba loo soo bandhigay shaqada Celtic, iyadoo kooxda reer Scotland ay damacsan tahay inuu si dhaqso ah u qabto xilka oo uu la tartamo saaxiibkiisii ​​hore ee England Steven Gerrard.
Previous articleArsenal iyo Manchester United Kooxdee ayaa loo badiyay in ay badin karto kulanka soo socda
Next articleMaxaa ku soo kordhay: Arsenal iyo Wararka Suuqa kala iibsiga ee Bisha January